HAFATRY NY EVEKAN'I MADAGASIKARA - AOVIVAORHE MADAGASCAR
HAFATRY NY EVEKAN'NY MADAGASIKARA NIVORY NY HERINANDRO TEO MOMBA NY FIAINAM-PIRENENA
1- Ianareo Mpanao Pôlitika
4- Hamafiso ny Finoantsika
- Amin’ny alahady ho avy, Fetin’i Kristy Mpanjaka no hizaran’ny Papa Benoît XVI ny teny fampirisihina vokatry ny sinaody manokana momba ny Afrika sy Madagasikara (“Fiangonana aty Afrika mampijoro ny fampihavanana, ny rariny sy ny hitsiny ary ny fandriam-pahelemena”).
- Manomana ny sinaodin’ny Eveka eran-tany momba ny fitorina ny Vaovao Mahafaly amin’ny vanim-potoana ankehitriny isika. Hankalazaina eto Madagasikara ny taon-jobilin’ny nahatongavan’ny finoana teto Madagasikara izay mifanojo amin’ny taonan’ny Finoana ho an’ny ny Fiangonana eran-tany (11 Oktobra 2012).
- Ho an’ny Tanora Malagasy manokana dia miandrandra ny fankalazana ny JMJ Mada faha-7 any Antsiranana.
Mgr RAOELISON Jean de Dieu, Eveka mpanampin’Antananarivo Zoma, 18 Novembre 2011